Steam System Optimization (SSO) user level training | Industrial Energy Efficiency
Home News / Events Steam System Optimization (SSO) user level training
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) နှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍ စက်မှုလုပ်ငန်း/စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းအင်စနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ (Energy System Optimization) သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိရာ Steam Energy System Optimization User Level (၂) ရက် သင်တန်းများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း
(က) ၂၆-၉-၂၀၁၆ (တနင်္လာ) မှ ၂၇-၉-၂၀၁၆ (အင်္ဂါ) အမှတ်စဉ် (၄)
(ခ) ၂၉.၉.၂၀၁၆ (ကြာသပတေး) မှ ၃၀.၉.၂၀၁၆ (သောကြာ) အမှတ်စဉ် (၅)
တို့ကို ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ အမှတ် ၃၅-ဘီ/၁၅၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန သင်တန်းခန်းမတွင် International Expert မှ နံနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၄:၃၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး အခမဲ့ဖြင့် သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Boiler အသုံးပြုသည့် စက်ရုံများမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ Operator များ၊ Boiler အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချလိုသော စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ၊ မိမိဝန်ထမ်းများအား စွမ်းအင်မန်နေဂျာများအဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးလိုသော စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ၊ စွမ်းအင်မန်နေဂျာအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသူများ၊ စွမ်းအင်စနစ် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ် Energy System Optimization ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ User နှင့် Expert Level သင်တန်းများ တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီးပါက Steam System Optimization Expert အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။
သင်တန်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား International Steam System Expert မှ စက်ရုံ၏ Steam System Optimization အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ Thermodynamic and Heat Transfer အကြောင်းခြင်းရာများ၊ Steam Best Practices Software Tools အသုံးပြုနည်းများနှင့် အခြား ဆက်စပ်အကြောင်းခြင်းရာများကို သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ထားသဖြင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး စိတ်ပါဝင်စား တက်ရောက်လိုသူများသည် Application form ကို www.ieemyanmar.com/?page_id=4452 တွင် download ရယူဖြည့်စွက်၍ e-mail T.OO@unido.org, A.ZIN@unido.org သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 09-5190979, 09-421131085 များသို့ ၂၀-၉-၂၀၁၆ (အင်္ဂါ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဆက်သွယ်၍ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
1. Bachelors in Engineering (or)2years relevant engineering experience
2. At least2years working experience with or in industry related to steam systems O & M, Design, etc.
4. Proficient with computers, especially using spreadsheet type programs such as Microsoft Excel
5. Good interpersonal communication and technical report writing skills
Energy Management System (EnMS) Module3Training
Steam System Optimization (SSO) Expert Candidates_SSO 4th & 5th Batch
Steam System Optimization (SSO) User Level Training_4th & 5th Batch